Soomaaliland oo balan-qaaday in ciidamada booliska lagu qalabayn doono diyaarado Helicopters – Radio Daljir
Soomaaliland oo balan-qaaday in ciidamada booliska lagu qalabayn doono diyaarado Helicopters
Nofeembar 24, 2013 1:08 b 0
Hargaysa, November 24, 2013 – Maamulka Soomaaliland ayaa shaaciyey in ay dardar gelin doonaan howlaha amni sugida ee gobollada kala duwan ee maamulkaas, ciidamada booliska ayaa hab casri ah loo qalabaynayaa.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warancade oo saxaafada kula hadlay Hargaysa, waxaa uu sheegay in ay ciidamada ku qalabayn doonaan dhowr diyaaradood oo kuwa helicopters-ka ah, si ay uga qayb qaataan howlaha adkaynta nabad-gelyada.
?boolisku dhowaan waxay heli doonaan diyaarado kuwa dagaalka ah, si ay uga qayb qaataan howlaha amni sugida ee waa wayn marka loo baahdo.? Ayuu yiri wasiir Warancade
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ciidamada booliska ku wareejiyey 7 baabuur oo nooca gurmadka deg deg ah, sidoo kale ciidamada Taraafikada wadooyinka ayaa wasiirku ku wareejiyey derayska shaqada.
Mudane Waranacade ayaa ku dhiiri-geliyey ciidamada ?Ciidamada kala duwan ee booliska iyo taraafikada qalabayntooda aad ayaan u sii kordhin doonaa.?
Meleteriga huwanta ah ee jooga gobolka Hiiraan oo maanta weerar ku ah degmada Buulo-burte
Baahin: Sabti, 23 Nov 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo